Arabisc: Mamaky Ady Ny Jamba Ao Maraoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2017 3:09 GMT
Ao Maraoka, nisy andian'olona jamba niomana ny hanao hetsipanoherana somary miavaka.
Lazain'ilay bilaogera Dar Lakbira fa nanapaka hevitra izy ireo ny hitondra lambampaty rehefa manao diabe ny 7 Febroary 2007 mba hitaky bebe kokoa ny zony sy fanohanana avy amin'ireo sampandraharaha sosialy hisarihana ny saina amin'ny fitarainan'izy ireo, fitarainana izay ahitàna tsy fahafahana mahazo asa tsara antoka – na misy aza lalàna mazava tsara milaza fa tokony homena laharam-pahamehana amin'ny fiantohana hahazoany asa azo antoka ireo manana fahasembanana ao Maraoka.
Dar Lakbira, izay midika hoe Trano Goavana amin'ny teny Arabo, dia tsy manafina ny fanohanany an'io lafiny iray ao anatin'ny fiarahamonina io, izay lazainy fa tena miaritra tokoa ny mafy, toy ireo sehatra hafa voahitsakitsaka ao amin'ny fireneny.
كلما مررت في طرقي للعمل بشارع الأبطال بأكدال، أطأطئ رأسي امام جموع إخوتي المكفوفين الذين يرابطون أمام وزارة ياسمينة بادو…وضعية مأساوية تتقطع القلب إنسانيا وتتقطع القلب اجتماعيا لهذه الفئة المحرومة وسط فئات كثيرةمحرومة سواء بصحتها أو بدونها….
“Isaky ny mandalo amin'ity arabe ity aho rehefa handeha hiasa, manondrika ny lohako noho ny henatra rehefa mahita ireo olona jamba mitoby eo ivelan'ny Ministeran'i Yasmina Badu (ilay Sekreteram-.panjakàna Maraokàna ao amin'ny Ministeran'ny Fampandrosoana Sosialy ao Maraoka). Tena zavadoza manjo ny maha-olombelona marina tokoa io, izay mahavaky ny fo. Zavadoza ara-tsosialy ho an'io sehatra iray vohitsakitsaka ao anatin'ny fiarahamonina io, izay tsy omena ny zony – na manana fahasembanana izy ireo na tsia,” hoy izy manoratra.
Avy eo i Dar Lakbira manome topimaso momba ny tolon'ireo jamba kasain'izy ireo hatao mba hahazoana ny sasany amin'ireo zo nofaritan'ny lalàna ho azy ireo.
المكفوفون و في تصعيد غير مسبوق قررت شراء الأكفان البيضاء وتنفيذ ما اسموه بالاستشهاد الجماعي في بلاغ وزعوه على ساكنة الرباط يوم 7 من فبراير المقبل احتجاجا – كما يقول البلاغ دائما -على سياسة التماطل و التهميش في التعاطي مع قضيتهم مما أدى إلى إحباطات نفسية عليهم و احتجاجا على سياسة التمييز اتجاه الكفيف المعطل رغم الأولوية المضمونة قانونيا، ثم احتجاجا على تسليط الآلةالقمعية على الحركات الاحتجاجيةالسلمية، و في آخر البلاغ يهيبون بكل مكونات المجتمع (يعني نحن) بالتضامن معهم ومساندتهم…ثم تذيل البلاغ بهاتف للتضامن : 012110131
هذه صرخة أخرى لمساندة إخوتنا المكفوفين ولو بالهاتف (أضعف الإيمان)..” …
“Tanaty fihamafisana tsy mbola nisy toa azy, nanapaka hevitra ireo jamba ny hividy ambonin'akanjo fotsy mba hanatanterahany ny antsoin'izy ireo hoe martiora faobe. Tao anaty fanambaràna iray naparitaka tao Rabat, nilaza izy ireo fa hanao hetsipanoherana amin'ny 7 Febroary, hanoherana ny politikan'ny governemanta amin'ny fanaovana ny olana sy ny fangatahan'izy ireo ho anjorom-bàla ka mahadona hatramin'ny maoralin'izy ireo. Hetsipanoherana hatao mba hanehoana ny fandavan-dry zareo io politikan'ny fanavakavahana amin'ny fampiasàna ny jamba io, na dia nomen'ny lalàna tombondahiny aza ry zareo. Manao diabe ihany koa izy ireo hanoherana ny fandraràna ny fanaovana fihetsiketsehana am-pilaminana. Mandrisika ny fiarahamonina manontolo ihany koa ry zareo (izany hoe isika) mba hanohana ny fitarainan'izy ireo. Misy antso napetrak'izy ireo hahafahana mifanohana ety anaty aterineto, azo antsoina amin'ny 012110131. Kiaka iray hafa ity ho fanampiana ireo rahalahintsika jamba, na dia ho antso iray monja amin'ny telefaona aza, ary io no kely indrindra azontsika atao,” hoy izy nanoratra.